Ongorora: 'Dema Mvura: Gomba rakadzikadzika' Rinoyerera Murima - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Ongorora: 'Dema Mvura: Gomba rakadzikadzika' Rinoyerera Mune Rima
Ongorora: 'Dema Mvura: Gomba rakadzikadzika' Rinoyerera Mune Rima
by Jacob Davison August 6, 2020 875 maonero
Pane chimwe chinhu nezve mhuka dzinodya mhuka uye njodzi dzinongoitika dzoga dzinonyatsorova tsinga ine primal psyche. Asa mhando, isu takafambira mberi kusvika padanho rekuti isu hatifanire kunetseka nezve chimwe chinhu chiri pamusoro pedu pane chikafu chekudya chinotora kuruma matiri. Asi zvakadaro, kutya kunoramba kuripo. Izvo zvakare zvinotsanangura kuti sei chaihwo hupenyu hwezviitiko zvekurwiswa kwemhuka zviri nhau dzakadai. Nguva dzese bere kana shark painorwisa mumwe munhu, ndiwo musoro wenyaya. Sezvazvaive zvakaitika mugore ra2003 apo vatatu vevechidiki vakabuda vakaenda kurenje reKumaodzanyemba kweAustralia vachizviwana vakakomberedzwa nengwena ine hukasha. Izvi zvakashanda sehwaro hwemufirimu wa2007, Nhema Mvura. Zvino, mamwe makore gumi nematatu gare gare, imwe nhanho inomuka kubva kumaruwa ne Mvura Dema: Gomba rakadzikadzika.
Kutora mamiriro kudzokera kuchamhembe kweAustralia, Jennifer (Jessica McNamee) akakurudzirwa nemukomana wake anotya Eric (Luke Mitchell) neshamwari Yolanda, Viktor, uye Cash (Amali Golden, Benjamin Hoetjes, Anthony J. Sharpe) vanosarudza kuenda kunonamira renje. Inodzikira mune ichangobva kuumbwa uye inoita kunge isina kubatwa bako bako. Sezvo nhamo yaizove nayo, dutu rakarova, mafashama akafukidza nekuisa zvisimbiso mukati. Uye kana izvo zvisina kukwana zvakanyanya, vane vamwe vaeni vane nzara zvikuru vane nzara vavanotarisana navo.
Mufananidzo kuburikidza IMDB
Director Andrew Traucki akatungamidza iyo yekutanga nyaya yekupona kwegarwe mu Nhema Mvura uye akaita basa pamhuka imwechete yakafanana nengozi ye Reef uine vashambira vs shark. Iye zvino, achidzoka ega, adzokera kumidzi yake neiyi nzira yekunamata. Nehurombo kunyangwe paine mukana wegadziriro uye zano uye kutyisa kusingaperi kwemakarwe, bhaisikopo harisi iro rinonakidza. Mukumuka kwemafirimu akadai se Kambaira uye 47 Mamita Kuderera iyo yakakwanisa kukwidza matanda kusvika pakakwirira padanho sezvavaigona kuenda. Saka, nepo Mvura nhema: Gomba rakadzikadzika ine fungidziro inonakidza inovimbisa njodzi zhinji, iko kuita nekutyisa kwevavengi garwe kunowanzo slog pamusoro.
Kutarisa kukuru kwechirongwa kunowanzo kuwira kune mavara akawanda madhiri uye mu-kurwa sezvavanotamburira kurarama. Izvo zvakanaka kuzadza hunhu hwavo zvakadzama zvakanyanya, asi panguva imwechete zvinowira mune sipo opera senge mutambo. Zvakaita sekudzorerwa kwaViktor kubva pagomarara uye vamwe vachinyanya kutendeuka uye kutendeuka muhukama hwevatambi nezvakazaruro. Uye ngatitarisei chokwadi, isu tiri pano kune zvikara, mune ino kesi, makarwe. Nenzira iyo bhaisikopo rakapepetwa isu hatitore yakawanda yadzo sekuda kwedu uye zvinotyisa hazvishande zvizere.
Zvimwe zvezviitiko zvandaifarira mumuvhi zviripo pakutanga pakutanga kwekutanga kwemhando. Vaviri vashanyi veJapan (Louis Toshio Okada, Rumi Kikuchi) vari kupopotedzana kumaruwa apo ivo netsaona vachidonhera pasi mukati meye croc bako masisitimu pazasi. Inoita kuputika chaiko kweadrenaline kunyangwe iri pfupi. Uye iyo bhaisikopo inoshandisa zvakanaka iyo shaya kunge kiredhiti kezvishoma zvaunoona, zvinotyisa izvo. Dzimwe dzenguva dzakaomesesa ndedze apo vatambi vanofanirwa kuyambuka nepakati pemvura inogarwa, vasina chokwadi chekuti imwe yezvikara zvine mutsindo icharwisa riini.
Hakusi kuputsa chaiko, asi kana iwe uri mumamiriro ekukurumidza nyaya ye spelunkers vs makarwe pasi pevhu, izvi ndezvenyu.
Mvura Dema: Gomba rakadzikadzika inorova VOD muna Nyamavhuvhu 7th, 2020